umkhondo 2: izibane On — UHAMBO LEE - SITE OFFICIAL
Uqalo / kwisampulu
Thina asazi apho siya khona (phinda)
Khangela ngeenxa konke mnyama, yonke emnyama yonke
Ngokufanayo izigidi indoda hambo, kodwa mna ndithetha kwinkxalabo yonke
iintliziyo Dark, imiphefumlo ezimnyama
iingqondo Dark ukubhala ukuhamba ezimnyama
Ndingalufumana ukukhanya encinane nangona?
Ingaba loo nto mna kunilwela?
Hey thina eyimfama ukuze asazi
Ngaloo ngohola siye
Hambani isantya ngokupheleleyo phambili, luphaphazela kodwa sityhafile
Kodwa andazi nje into yokuba wayezuza kwivenkile, hayi ngaphezulu esiwa ngenxa uC.M Doke Okie
Nope, uya kusinika emehlweni ngezinto zange ndabona phambi
'De ukuba ukukhanya ukufumana ukuba amalahle, asazi apho siya khona
Kodwa ke akukho kwimephu google ubomi, kwaye loo nto ifana yaphulwe izibane zethu
ubungqina: thina ebengezelayo, edlula kwi butyebi leyo zegolide
Kuba abathile nickel nobhedu, uzama ukufumana uzuko nto ezibiweyo
Avune into ayihlwayelayo
Hey sonke simelwe amaphupha, lo wam
Mna ndithandaza ukuba akanakuze akuva ukuba nokucima Ulibengezelele, kids abaziimfama
Siyazi ninayo, Nkosi siyazi wawusifumene ngawo
kuwe kuphela onokuthatha ngayo ephakamileyo, ukuba umqhubi
Thina asazi apho siya khona
Thina ngoko kude nekhaya lethu
ifowu-, akukho amandla ngayo
homies bakowethu, kufuneka ukuba ubonise kubo ukuze bababuvisele ilayite
Side siye apho amanzi yokuphila ayebaleka bababuvisele ilayite
Ndandihamba ndedwa phantsi elimnyama nasezirhangeni ndinqwenela coulda eyaziwa
Mna uvalelwe ibhokisi blinders evalela emehlweni am kwetrone
Esakuva kwabanye kunokuba sithembele kuThixo ndimkile
Kodwa ingqondo yam ulahliwe, xa Wabengezela ukuba ukukhanya ekhayeni lam
Ikhulula bubuthongo yesigungxo, ngesantya ngokupheleleyo elinezihlalo umva
Ngoku ukuqhuba izibane intloko phezu, ukuba eweni, lwela ndibona ukuba
ukugwegweleza, uwe niyajika, young uwe lady ongakubuyisayo phantsi
180, obungafezekanga ngoku, ke ndiphuthuma kwaye alomeleli
Nkosi Dear, abantu bethu ezilahlekileyo ubone udubulo, kokubulala
Ngubani lucifer evakalala? sonke Ungaqhatheki kwaye ukulungele
Yaye andiyityhilelwanga ezibusithelisileyo, uzuko oluvela ebantwini
Thina baya kuba ngcwaba nokuhamba kumgwebo yethu
indoda, enkosi ngokutsala mna ukuba igumbi mnyama
inyaniso yakho bamhlabayo intliziyo yam ngeenyembe, akukho cartoon
Yinto bawisa, kungekho kukhanya kanye abamnyama
Nceda kubanika ubabalo, Ndiyazi onalo ngakumbi Kwathi ngaphandle
Ngaba uvula izibane?
Ngaba uvula izibane kum?
Morgan • EtiMnga 31, 2014 ngexesha 1:06 pm • impendulo
Ngoko ke ababuyeli njani mna ngeenxa? iingxaki zam ezincinane kodwa phantse Iyandikhathaza.
Kianna • EyeKhala 4, 2016 ngexesha 8:36 mna • impendulo
UYesu yindlela ukuba nijike. UYesu Kristu wehla weza emhlabeni ukuze asindise aboni nje ngam nawe. Waphila ubomi obugqibeleleyo kwaye wafa aboni. Yeyona uthando uYesu usinika ukukwazi ukuba nijike. zama uYesu! Ndithi kuni, inene, ukuba akuyi kudana.